Mpanakanto ao Congo Mivondrona manohana ny “Leopards”
Krizy sy fitokonana Mikatso tanteraka ny any Frantsa
Fitokonana maherin’ny 250 isa no mitranga any Frantsa ary dia mikatso tanteraka ny asa aman-draharaha, ny fitaterana…
Tsy fisian’ny tongolo any Bangladesh Nandray andraikitra avy hatrany ny fanjakana
Ny orana be nahazo an’i India ka niantraika tamin’ny famokarany no nahatonga azy tsy hanondrana tongolo intsony.
Ela ny ela Nahazo Tale Jeneraly ihany ny CNaPS
Araka ny tolo-kevitry ny minisitry ny asa ny fampananan’asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy, dia notendrena ho Tale Jeneralin’ny Tahirim-pirenena ho an’ny fiahiana ara-tsosialy na ny CNaPS Atoa Mamy Rakotondrainibe.
Andro ratsy sy kotro-baratra Nirehitra ny Cercle Mess Iavoloha
Nirehitra ny trano fivorian’ny miaramila (Cercle Mess), tsy lavitry ny Lapam-panjakana eny Iavoloha omaly hariva.
Nodimandry i Jacques Chirac Niavaka ny fifandraisany tamin’i Madagasikara
Nodimandry tao Paris omaly 26 septambra teo amin’ny faha-86 taonany ny filoha Frantsay teo aloha Jacques Chirac, rehefa nolazoan’ny aretina an-taonany maro.
Gidragidra atsy Afrika Atsimo Tafiakatra 200 ireo voasambotra
Mitohy ny gidragidra atsy Afrika Atsimo noho ny hetsika fankahalana ireo teratany vahiny.
Tompondaka farany tamin`ny lalao fifaninanana baolina kitra CAN 2017 ny ekipan`ny “Leopards”
an`ny Repoblika Demokratika Congo ka nanao fanambarana tamina tranonkala iray fa tsy maintsy miverina ao amin`ny taniny ny amboara amin`ity taona ity. Manohana azy ireo ihany koa ireo mpanakanto malaza indrindra miisa 10 ao Congo toa an`i Poisson Mobutu, Kaysha, Nathalie Makoma, MJ 30, Nzetè, Rebo Tchulo, Tutu Callugi, Oliverman Noah, Iunsi, BM Killer ary Tresor Luala. Nivondrona ho iray ireto farany tamin`ny fanatontosana horonantsary tokana entina hanohanana ny ekipam-pirenena. Mby aiza ny fanohanana eto amintsika amin`ny fiatrehana ny CAN 2019 ?